गँजडी र मगन्तेमुक्त गरी ध्यान र योग साधना केन्द्रमा परिणत हुँदै पशुपति क्षेत्र - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
गँजडी र मगन्तेमुक्त गरी ध्यान र योग साधना केन्द्रमा परिणत हुँदै पशुपति क्षेत्र
काठमाडौं । गाँजा तान्ने अखडा र माग्नेको लामलाई मुक्त गरी पशुपति क्षेत्रलाई ध्यान तथा योग साधना स्थलका रुपमा योजनाबद्ध विकास गर्ने अभियान शुरु भएको छ । गाँजा खाने एवं किनबेच गर्नेको अखडाका रुपमा रहेको वाग्मती किनारको सूर्यघाट क्षेत्रका १० वटा गुफा खाली गरी रंगरोगन शुरु गरिएको छ । सूर्यघाट क्षेत्रलाई ध्यान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“छ महिनामा ध्यान केन्द्र तयार हुनेछ, केन्द्र तयार भएपछि निश्चित दिनका लागि ध्यान गर्न चाहनेलाई केन्द्र उपलब्ध गराइन्छ, केन्द्रमा बसेर ध्यान गर्न चाहनेले तोकिएको शुल्क पनि तिर्नुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो । आगामी शिवरात्रिसम्म ध्यान केन्द्र निर्माण गरिसक्ने कोषको योजना छ ।
पशुपति क्षेत्रमा सबैभन्दा पुरानो अभिलेख भएको वाग्मती किनारको सूर्यघाटक्षेत्र सिद्धस्थल मानिन्छ । सूर्यघाट क्षेत्रको गुफामा गुरु गोरखनाथ, शिवपुरी बाबा, खप्तड स्वामीलगायतका सिद्ध पुरुषले साधना गरेको अभिलेख पाइएको कोषका सूचना अधिकारी प्रेमहरि ढुंगानाले बताउनुभयो ।
पूर्वी मोहडा भएको र पूर्वमा वाग्मती बगेकाले सूर्यघाट क्षेत्रका गुफा साधनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । वाग्मतीको कन्दराबाट पूर्व फर्केर बिहान अघ्र्यदान गर्नु उत्तम हुने शास्त्रीय ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ । सूर्यघाटमा पाइएको विजयमतीको अभिलेख पशुपति क्षेत्रकै पुरानो मानिन्छ ।
मृगस्थली र विश्वरुप क्षेत्रमा पनि मण्डप निर्माण गरी ध्यान गर्ने स्थान बनाइँदैछ । जंगलको बीचमा व्यक्ति व्यक्तिले बसेर ध्यान गर्न सक्ने गरी मण्डप निर्माण गर्न लागिएको हो । पशुपति क्षेत्रका सबै स्थानमा कोषले नै ध्यान केन्द्र बनाउने जनाएको छ ।
पञ्चदेवलमा पाशुपत योग साधना केन्द्र
पशुपति दक्षिण ढोका अघिको पञ्चदेवलमा पाशुपत योग साधना केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । घर घरमा पाशुपत योगको साधना गराउने उद्देश्यले उक्त केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।
वेदले दिएको पाशुपत धर्म नेपालीको भएकाले यसका बारेमा जानकारी गराउन कोषको सहयोगमा केन्द्र स्थापना गरिएको महात्मा सुशीलले जानकारी दिनुभयो । पाशुपत योगका विषयमा जानकारी दिन उहाँले ‘पाशुपत योग’ नामक पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ । यो पुस्तक रसियन भाषामा समेत अनुवाद भइसकेको छ ।
पाशुपत योग अंग्रेजी भाषामा अनुवादका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभागका प्राडा कृष्णचन्द्र थापाले काम गरिरहनुभएको छ । यस वर्षको दशैंसम्म अंग्रेजी अनुवाद भइसक्ने थापाले जानकारी दिनुभयो ।
हिमवत्खण्डबाटै योग साधनाको शुरुवात् भई संसारभर फैलिएको थियो । आदि कालमा भगवान शिवले सिकाउनुभएको योग पाशुपत नै थियो । चार वेद र १८ पुराणमा पाशुपत योगको वर्णन रहेको छ । लिङ्ग पुराणमा भने पाशुपत योगका विषयमा मात्र चर्चा गरिएको महात्मा सुशीलले सुनाउनुभयो ।
पौराणिक कालमा भगवान् शिवले पाशुपत योगको ज्ञान दिनुभएको विश्वास गरिन्छ । समाधि अवस्थामा जीवात्मा परमात्मामा मिलन हुनुलाई नै पाशुपत योग भनिने उहाँको भनाइ छ । ब्रह्म प्राप्तिका लागि पाशुपत अष्टाङ्ग योगलाई साधना गर्ने परम्परा बसेको हो ।
आत्म ज्ञान प्राप्तिका लागि उत्तम स्थानमा बसेर साधना गर्नुपर्छ । साधनाबाट ज्ञान पाइन्छ । ज्ञानको वशमा मन वशिभूत हुन्छ । मन वशमा भएपछि आत्मा प्राप्ति हुन्छ । आत्म साक्षात्कार भएपछि नश्वर संसारबाट मुक्ति पाइने भएकाले पाशुपत योगको अभ्यास आवश्यक रहेको महात्मा सुशील बताउनुहुन्छ ।
पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिममा हिन्दकुश, उत्तरमा कैलाश मानसरोवर हिमालय र दक्षिणमा गंगासम्मको भू–भागबाटै योग, ध्यान साधनाको शुरुवात् भएको विश्वास गरिन्छ । चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्दै आत्मामा एकचित्त हुनु नै योग हो । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधिलाई अष्टाङ्गयोग भनिन्छ ।
अष्टाङ्गयोगको अभ्यास गर्ने व्यक्ति अनेक जन्मको संस्कारबलबाट यसै जन्ममा सिद्ध भएर पापबाट मुक्त भई परमगति प्राप्त गर्छ । पाशुपत योग धर्मका दश लक्षणमा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा, सरलता, धृति, मिताहार र पवित्रतालाई लिइएको छ । पाशुपत योग साधना केन्द्रमा हाल दैनिक सयौँ मानिस साधनाका लागि आउने गरेका छन् ।
यहाँ स्वदेशी एवं विदेशीलाई पनि योग, ध्यान सिकाइन्छ । केन्द्र स्थापनाको छोटो अवधिमा धेरै विदेशी समेत यहाँ आएर योग, ध्यान सिकी लाभान्वित भएका छन् । रासस
हिटलरको रहस्यमय जीवनी ,एक पटक पढ्नै पर्ने सन्दर्भ
जर्मनीका शासक हिटलर विश्वविख्यात तानाशाह मानिन्छन् । उनका बाबु एलोइस सन् १८३७ मा जन्मेका थिए । उनी, मारिया […]
मन छुने लाइनहरू, जसले हाम्रो सोचलाई हल्लाई दिने छन्
मन छुने लाइनहरू जसले सोचलाई बदल्ने ताकत राख्छन्। जीवनलाई संभावना ले कुंदन सकिन्छ । मेहनतको अगाडि असफलता […]
अब बदलिने सरकार हो कि संविधान ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही गर्न चाहँदैनन् भन्ने ठान्नु गलत हो, उनी केही पनि नगरी चुपचाप बसिरहेका छन् […]
परोपकार गर्दा-गर्दै ढल्न पाइयोस्
मुक्त्तक परोपकार गर्दा-गर्दै ढल्न पाइयोस् । सन्तुष्ट हुंदै चितामा जल्न पाइयोस् । जरुरी पर्यो भने चिहान […]
Inspirational words for self improvement and motivation !
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. – Confucius Everything you’ve ever […]
मन छुने सुन्दर हरफहरु !
मन छुने सुन्दर हरफहरु ! आफुले गरेको गल्ति बाट ज्ञान सिक्न जीवन छोटो छ र सिके पनि महङो पर्न सक्छ ! तसर्थ […]